को हुन् बालेन शाह ? किन बन्न चहान्छन् काठमाडौंको मेयर ? « On Khabar
६२,९२७ गन्दा ३८.६७% अर्थात २४,३३५ मत बालेन पाएका छन् । एमालेका केशव स्थापितले बालेनको तुलनामा निकै कम १२,७१२ मत ल्याउदाँ गठबन्धनकी सिर्जना सिंहले ११,९१६ मत ल्याएकी छन् । यसरी देशकै मुटु राजधानी काठमाडौं महानगरमा बालेनको चर्चामात्रै होईन मेयर बन्ने सम्भावना व्याप्त देखिन्छ । डबल मतले अग्रता लिन थालेपछि चर्चामा आएका मेयर बालेन शाह को हुन ?
नयाँ पुस्ताले रुचाएका पेशाकर्मी, –यापर तथा कवि–लेखक साहको राजनीतिक अवतारको चर्चा भने भूगोलभन्दा भर्चुअल माध्यम अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा बढी छ । विशेषतः फिल्म, संगीत र फेसन क्षेत्रका सेलिब्रिटीहरु साहको पक्षमा देखिएका छन् । अभिनेत्रीहरु प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, निर्माताहरु माधव वाग्ले, सन्तोष सेन, हास्य कलाकार निर्मल शर्मा खुलेरै उनको पक्षमा लागेका छन् । निर्देशक निश्चल बस्नेत र गायिका इन्दिरा जोशी साहको घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममै उपस्थित थिए । साहले चुनावी घोषणा पत्रमा डिजिटल सरकारदेखि आइडिया बैंकसम्मका योजना अघि सारेका छन् । उनले काठमाडौंको मेयरमा उमेद्वारी दिने गरी तयारी ५ बर्ष अगाडीदेखी नै गरेका थिए, यो विचमा उनले घरबेटीसँग बालेन, अबको काठमाडौं जस्ता लोकप्रिय अभियानहरुसमेत संचालन गरे ।बाहिरबाट काठमाडौं पढ्न गएका विद्यार्थी नै उनका लागी सबैभन्दा चुनाव प्रचारका मुख्य स्रोत थिए ।
किन बन्न चहान्छन त उनी काठमाडौंको मेयर ?
आफूले काठमाडौं महानगरको नेतृत्व गर्न पाए डिग्रीले भन्दा सिपले रोजगारी पाउने बताउँछन् उनी ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले विस्तारै काठमाडौं उपत्यकालाई नै २४ घन्टा खोल्नुपर्छ भनेका छौं । रेष्टुरेन्टहरूसँगै सरकारी कार्यालय पनि बेलुकीसम्म खुल्छन् । अनि सेवाग्राही राति आउँछन् र विद्युतीय बस चढेर जान्छन् । यसबाट जाम पनि घट्छ ।’
यो विचनमा नयाँ पुस्ताका मतदाता थपिएका छन् । बालेन साप्रतिको आकर्षण नयाँ पुस्तामा बेसी छ । काठमाडौंमा हरेक चुनावमा एउटा पंक्तिले नयाँ परीक्षण गर्ने गरेको छ । यस्तो ‘स्वीङ भोट’ अत्यधिक रहेको विगतका निर्वाचनहरुले देखाएको छ ।
वैकल्पिक राजनीति कमजोर भएको बेला पुरानालाई प्रतिस्थापन गर्न चाहने युवा मतदाताको रोजाइ बालेन साह बन्न सक्छन् । उनको मुख्य अनुकूलता यही देखिन्छ । तर, आफूले भोट दिँदै आएको पुराना दलहरुप्रति ‘लोयल’ मतदाता बाक्लो रहेको नेपाली समाजमा स्वतन्त्र उठेर विजय हासिल गर्नु उम्मेदवारलाई फलामको च्यूरा चपाएजस्तै हुने देखिन्छ । नयाँ पुस्ता उनको लागि अनुकूल देखिए पनि जितका लागि निर्णायक पुराना मतदाताको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती छ । उनी आत्मविश्वासका साथ भन्छन्, ‘काठमाडौंका ३२ वटै वडामा गएर प्राप्त डेटालाई एनालाइसिस गरेका छौं, त्यसबाट मैले ९० हजार ८३५ भोट ल्याउँछु भन्ने देखिएको छ ।’
गत निर्वाचनको अंकगणित पनि उनका लागि प्रतिकूल देखिन्छ, जसमा एमालेका प्रत्याशीले ६४ हजार ९१३ मत ल्याउँदा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन झण्डै १० हजार मतले पछाडि परेको थियो । अहिले बढाएको मतको रेसियो हेर्ने हो भने बालेनलाई अबको केही समयमै काठमाडौंको मेयरमा सम्बोधन गर्न समय लाग्ने छैन । यदि बालेनले जिते भने अबको निर्दलियता र सँगसँगै राजनीतिक दलको विकल्प जनताले खोजका हुन भन्ने प्रश्न उठ्ने स्वभाविक देखिन्छ । नयाँ पुस्ताको रोजाईमा परेका बालेनलाई हाम्रो पनि शुभकामना ।